मदिरा नरोक्नुस् गृहमन्त्रीज्यू - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
कतिपय आदर्शहरु सुन्नका लागि बढी आनन्ददायी हुन्छन् । राजकीय भोज होस् या कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्दा होस् मदिराको फिँज उडाउने चलनले संसार ढाक्दै गएका बेला नेपाललाई खुम्च्याउन नखोज्नुस् । बरु अझ बढी कर लगाउनुस् ।
गृहमन्त्रीज्यू नमस्कार !
नयाँ नेपालको संकल्प साकार पार्ने अभियानमा हामी सबै छौं । नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ यसर्थ लोकप्रिय बन्नभन्दा पनि प्रियलोक बनाउनका लागि नीतिनियम बनोस् । सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरें, अन्यथा अर्थ नलागोस् । नेपाललाई मदिरा निषेध मुलुक बनाउने चलखेल सुनेपछि म झस्केको छु । राजनीतिक परिवर्तनपछि जुर्मुराएको आर्थिक परिवर्तनको तरंगलाई शिथिल हुन नदिनुस् । अर्थतन्त्र बलियो भएन भने देशले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक योजना लगायत विषयमा मनग्य बजेट पु¥याउन सक्दैन ।
१. तपार्इंले १५ मिनेट समय निकालेर अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर सोध्नुहोस् कि– ‘नेपालको आन्तरिक राजस्वको कति प्रतिशत मदिराजन्य पदार्थबाट जम्मा हुन्छ ?’ जबाफ पाउनु हुनेछ कि ‘२५ देखि ३० प्रतिशत’ । अब सोच्नुहोस्, उक्त रकम कताबाट मिलाउनु हुन्छ ?
२. नेपालका ठूला शहरबजारमा भएका रेष्टुरेन्ट, बार, गजल, होटलको मुख्य व्यापार भनेको मदिरा हुन् । यी व्यापारमा मदिरा भएन भने ग्राहक र व्यापारीले के सेवा दिने ? यसमा काम गर्ने लाखौं कामदारलाई केमा काम लगाउनु हुन्छ ?
३. मदिराजन्य उद्योगमा लगानी भएका खर्बौं रकम र लाखौं कर्मचारी कामदारलाई के गर्नुहुन्छ ? विदेशमा केही ठूला कम्पनी बन्द हुँदा अर्थतन्त्र हल्लिएको उदाहरण छँदैछ ।
४. संसारमा हालसम्म १९ ओटा मुख्यतः मुस्लिम देशहरुले पूर्ण र आंशिक गरी मदिरा निषेध गरेका छन् । अफगानिस्तान, बंगलादेश (गैह्र मुस्लिमलाई छुट), ब्रुनाई, इरान, इराक, इण्डोनेसिया (साना व्यापारीलाई बन्देज), भारतका केही राज्यहरु, लिबिया, कुवेत, मालदिभ्स (गैह्र मुस्लिमलाई छुट), मौरिटानिया, पाकिस्तान (गैह्र मुस्लिमलाई छुट), साउदी अरब, सोमालिया, श्रीलंका (महिलालाई बन्देज), सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (शारजाह क्षेत्रमा बन्देज), कतार, यमन । यी देशमध्ये तेलको कारणले सम्पन्न बनेका केही देशबाहेक अरु सबै देशको अर्थतन्त्र गरिब छ । देशभित्र सुरा र सुन्दरी भएन भने पर्यटक भित्रिँदैन । सुख्खा भात चाखेर हिमाल हेर्न भनेर नेपाल नै आउनु पर्दैन । विदेशीलाई मदिरा नभई निद्रा पर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र नै पर्यटन र रेमिट्यान्समा टिकेको छ । खानेले त यी बन्देज मुलुकमा पनि लुकिछिपी खाएकै छन् ।
५. अमेरिकाको कतिपय राज्यहरुले कर उठाउन पाइन्छ भनेर गाँजाभाङ बेचबिखनमा समेत छुट दिएको छ । कर उठाउन भेगासमा वेश्यावृत्ति र ४६ राज्यमा बन्दुक छुट दिएको देखेकै छौं । हामी भने मुख्य कर उठ्ने स्रोत नै बन्द गर्न खोज्दै छौं । सोच्नुहोस् ।
६. भियतनामको होचिमिन्ह र हनोई शहरमा कानूनन् वेश्यावृत्ति छुट दिएपछि शहरको अर्थतन्त्र नै फेरिएको उदाहरण छन् । त्यस्तै, थाइल्याण्ड, सिंगापुर त पर्यटकलाई स्वर्णभूमि रहेकै छ । देशसँग बलियो बजेट भयो भने अरु थिति बसाउँदै लैजान सकिन्छ ।
७. बरु मदिरा सेवन गर्न नमिल्ने ठाउँ छुट्याउनुस्, समय तोक्नुहोस्, सवारी चलाउन निषेध गरे जस्तै कार्यालय, स्कुल इत्यादिमा लैजान निषेध गर्नुस् ।
८. विविध संस्कृतिले भरिपूर्ण देशमा कतिपय जातजातिको जन्म, व्रतबन्ध, विवाहमा सगुन दिंदा मदिरा नभए अपूर्ण हुने चलनचल्तीसमेत रहेको छ । घरभित्र डराइडराई परम्परा गर्नुपर्ने अवस्था ननिम्त्याउनुस् ।
घरमा भान्छा पनि हुन्छ, चर्पी पनि हुन्छ । कुन चिजलाई कसरी, कहाँ राख्ने ? कुन तरिकाबाट सरसफाइ पु¥याउने भन्ने मुख्य कुरा हो । पूजाकोठाको अर्कोपट्टि चर्पी भएको घरमा नबसेको को छ र ? नेपालको सामरिक महत्व धेरै छ । नेपाल स्रोत र साधनको प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । यसर्थ पर्यटकलाई मन नपर्ने काम नगर्नुस् । एउटा भूपरिवेष्ठित राज्यले क्षणिक लोकप्रिय बन्नका लागि यस्तो बहुलट्ठी निर्णय गर्नु हुँदैन ।
रक्सी नखाए मानिस मर्दैन, तर नखाई पनि छोड्दैन । कतिपय आदर्शहरु सुन्नका लागि बढी आनन्ददायी हुन्छन् । राजकीय भोज होस् या कूटनीतिक मर्यादा कायम राख्दा होस् मदिराको फिँज उडाउने चलनले संसार ढाक्दै गएका बेला नेपाललाई खुम्च्याउन नखोज्नुस् । बरु अझ बढी कर लगाउनुस् । देशको ढुकुटीमा जँड्याको पैसा बटुल्नुस् । मानिसको कमजोरी मनोरञ्जन पनि हो, त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउनुस् ।